Mursal Ciise oo loo sheegay in Sweden aysan wadankiia ahayn, baabuurkiina laga burburiyay | Somaliska
Mursal Ciise oo loo sheegay in Sweden aysan wadankiia ahayn, baabuurkiina laga burburiyay
Mursal Ciise oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo ka mid ah gudoomiyaasha gobolka Dalarna ayaa saakay baabuurkiisa laga burburiyay, isagoo idaacada u sheegay in arintaan ay ka dambeyso cunsuriyad. Mursal ayaa sheegay in ayaantaan weeraro joogto ah lagu haayay isla markaana hanjabaado joogto ah lagu sameeyay.
Mursal ayaa dacwad u gudbiyay booliska. Waxa uu sheegay in ay fariimo badan u soo dheceen kuwaasoo ay ka midyihiin in lagu yiri in uusan wadankaan isagu lahayn isla markaana uu faraha kala baxo arimaha siyaasada. Mursal ayaa ah siyaasiga keliya ee Soomaaliga ah ee ka mid ah golaha sare ee xisbiga Miljöpartiet (MP) isla markaana ah gudoomiye gobolka Dalarna.
Mursal ayaa sidoo kale qeyb weyn ka ahaa aasaaska kooxda kubada barafka ee Somalia Bandy.
dadka ku bahoobey isirnaceybka waa soo saa ideen dowladana wax talaabo muuqda ma qaado
Jimcaale umada beenta ka daa nin yahoow, maxaa marwalbo umada been ugu sheegtaa?
waryaa illaah yaqaan ninkaan abdifatah jiifdiid layiraa ka qabto ninkan walalkeen jimcaale ee warka fiican umada ukeeno waxmatarahan layira abdifataf
Naagtan xildhibanada ahi waa iiraniyad sidaa awgeed waxba yaan lagu mashquulin isku doonbaan saaranahaye waanay is ogayn, qoloda ay iska gadaysaa iyadana naf uma hayaan oo waa inala mid. ee malaha waanay is ogayn waxa ay tahay.
Dadnimo suufi aqli gaab ayaa iska tahay, marka kula yaabi mayo
KKKKKKKKKKK WALEE HABARTA ODAYGA LASAAR BAA LAYIRI NINKAAN MAXAA KU DIRAY NINKAAN XAGEEBUU KALA DAGAALSAN YAHAY DAGAAL HOOSE BAA KALA DHEXEEYA SIDAAN ISLEEYAHAY WAR NAGA LEEXO